Iwo maapplication eLinux ausingakwanise kupotsa pamberi pekupera kwa2017 | Linux Vakapindwa muropa
Zvekare tinodzoka nenyaya nyowani yakanangana nevaya vachangomhara muchisiko cheLinux uye vachiri vakavhiringidzika kana kuvhiringidzika nezvazvo. iwo mafomu izvo zvavanogona kushandisa mukati meiyo GNU / Linux inoshanda sisitimu Kune avo vese isu tichaenda kunopa runyorwa nemamwe akanakisa uye akakosha mashandisirwo atinoshandisa zuva nezuva-zuva pane yedu Linux desktop. Uye zvakare, ese iwo anowanikwa mahara ...
Kune yedu runyorwa tichaenda kusarudza makumi maviri neshanu eanonyanya kushandiswa uye anozivikanwa mashandisirwo, kunyangwe paine dzimwe nzira dzakanaka kwazvo, dzimwe nguva mikana yacho yakafara kwazvo. Ndinoda kujekesa kuti haisi chinzvimbo kana chero chinhu chakadai, saka kana app isiri pachinyorwa, usafunge kuti chakasiiwa nekuti chaive chakaipisisa pane zvataurwa. Iwe unotoziva kuti muzviitiko zvakawanda inyaya yekuravira ...
Mozilla Firefox: Icho chimwe cheakanakisa mabhurawuza ewebhu aripo, pamusoro pekuve yakavhurwa sosi. Naizvozvo, hapana chikonzero chekusashandisa ... Pasina kupokana iyi ndiyo imwe nzira yakanaka yeGoogle Chrome, kunyanya nezvinhu zvitsva zvinozoshandiswa neshanduro 57.
Get: Uyu akanaka maneja wekurodha uyo anozokubatsira iwe kurodha pasi zvese zvaunotora mumutsetse wazvo zvakateedzana, pamwe nekugona kumbomira wozvitangazve, nezvimwe.
kufamba: inozivikanwa, isina uremu, yakapusa uye inokurumidza BitTorrent mutengi kuti ugone kuita kurodha pasi kuburikidza neino inozivikanwa protocol kuti ugovane data, pamwe nekugovana nevamwe vashandisi.
Mega: Iwe unotoziva iro rinozivikanwa gore rebasa rakabuda senge rinotsiva Megauplodad, asi kumirira iyo "nyowani" Mega iyo musiki wayo akazivisa kuti aoneke pachiitiko ... kwenguva iyo ndiyo imwe yemasevhisi akanakisa, nekukurumidza, ne encryption uye ine yakakwira kugona kunyangwe pasina kubhadhara iyo Premium account.
pidgin: iyo inonakidza yakavhurika sosi mutengi kuita chirongwa chakazara uye chine simba chiriporiporipo. Inotsigira kutaura kuburikidza nemasevhisi akasiyana siyana, akadai seGoogle Talk, Yahoo, IRC, nezvimwe.
LibreOffice: ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye yakanakisa hofisi suite pakati peavo emahara, pasina mubvunzo sarudzo yakanaka ichienzaniswa nedzimwe dzakadai seOpenOffice neCalligra Suite.
Rhythmbox: inoridza odhiyo kuti iwe ugone kuve neyako mimhanzi zvinyorwa zvakanyatso kutarisirwa uye kugadzirira kuzviteerera chero nguva.
VLC: ndeimwe yevane simba kwazvo vhidhiyo midhiya vatambi iyo inogamuchira mamwe mafomati, saka nayo haufanire kunge uine matambudziko nema codecs, iyo inosanganisira zvimwe zvinonakidza maturusi ekugadzirisa mavhidhiyo.
Guvva: suite yakazara yakatsaurirwa kune multimedia nyika, neiyi projekiti iwe unogona kuve neyako midhiya nzvimbo pakombuta yako. Chengeta mavhidhiyo ako, mumhanzi, mapikicha, nezvimwewo padyo, nekwaniso yekuwedzera kugona kwavo kuburikidza nemapulagi.
GIMP: pamwe chete naKrita, ivo vaviri vevane simba kwazvo, vanoshanduka uye vanochinja-chinja midhiya vatinogona kuwana munyika yemahara uye yakavhurwa sosi, kuve wakasununguka uye uine zvishoma zvekuchiva vamwe vakabhadharwa vakaita sePhoto Shop.
gedit: yakazara yakazara zvinyorwa zvemavara zvine kugona kune avo vasina mazano uye kune avo vese vanoda kuishandisa pakuronga uye kunyora.
Pinta: chimwe chezvirongwa zvekudhirowa chakafanana zvakanyanya neMicrosoft Paint, kunyange ichisanganisira mamwe mabasa epamberi ayo asingaitwe neMupepeti weMicrosoft.
Vhura-Sankore: kana mharidzo chiri chinhu chako, chishandiso chedhijitari chena chingakubatsira ...
Vokoscreen: chirongwa chine simba uye chinoshanda chekutora zvinoitika pahwindo rako, ndiko kuti, kwekuongorora.
Geany: yakakura sosi kodhi mhariri yeavo vese vari kutanga kuronga uye kuti iwe unogona kuperekedza pamwe neyekunyora senge gcc, nezvimwe, kana iwe usiri kuda kushandisa yakazara IDE.
Virtualbox: yakanaka imwe nzira yeVMWare Workstation, nayo unogona kubata nekumhanyisa ako chaiwo michina nemamwe masisitimu anoshanda.
thunder bird: yakakwana Mozilla suite yekuchengetedza yako khalendari uye tsamba nguva dzose kusvika padanho ...
Avidemux: cheka, namatidza, nyora ako mavhidhiyo neiyi hombe edhita pasina zvakanyanya kuoma.
aMuleKunyangwe zvichitaridzika kuti chirongwa ichi chave kuda kutsakatika, kuchine vanhu vanoshandisa rudzi urwu rwe software kugovana, saka ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzeMule, kunyangwe iri chirongwa chakatosiiwa.
ClamAV + ClamTK: iyo antivirus yeUnix world par kugona, neayo antivirus iwe unozogona kuchengetedza yako heterogeneous network yakachengeteka uye neiyo ClamTK interface iwe unodzivirira kuve nekuitarisira kubva kune koni nemirairo.
Shotwell Mufananidzo: maneja wemifananidzo yako iyo yauchange uine yakanaka gallery nguva dzose yaunogona.
BletchBit: inokutendera kuti uchengetedze yako system nguva dzose yakachena kubva kune mamwe mafaera ayo anotora yakawandisa nzvimbo pane yako hard drive, senge kwenguva pfupi mafaera, makuki, nezvimwe.
GParted: kugadzirisa zvikamu zvako, unogona kushandisa maneja uyu neyakareruka graphical interface kubva kune iyo fomati, kurongedza, kugadzira, kushandura resize, nezvimwe. zvekushandisa zvekuchengetera.
Envice / Okular- Uyu muoni wemapepa ePDF. Panyaya yekuve neGNOME desktop nharaunda uye zvigadzirwa, sezvazviri nekubatana, iwe unozogona kunakidzwa neEnvice, nepo kana uine KDE / Plasma iwe uchazviita naOkular.
PeaZip: chishandiso chekumanikidza uye kupwanya mafaira uine hushamwari GUI kuti ushandise nyore. Iwe unogona kushanda kusvika anosvika zana nemazana matatu emafaira.
Siya yako yekutaura...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Iwo maapplication eLinux ausingakwanise kupotsa pamberi pekupera kwa2017
Iyo Amule yave yechinyakare kwazvo nekuda kweiyo wxWidgets, mazuva ano ivo vari denda zvakanyanya pane chimwe chinhu chinoshandiswa, avo vane basa reiyo projekiti vanofanirwa kufunga nezve kuiisa kuQT kuvandudza kusangana uye kunyanya kugadzikana kwanhasi kwanyanya.
Amule anoenda kunge pfuti
Evince, kwete Envice
Pindura kuna Sete
Qbittorrent panzvimbo yekutapurirana iri nani sarudzo.
Inokosha 3D app: Blender
pint uye Open-Sankore